Ganacsatada Kenya oo ku baaqay in la soo celiyo noolasha caadiga - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Vimal Shah Facebook
Image caption Guddoomiyaha guddiga ganacsatada Kenya, Vimal Shah
Guddoomiyaha guddiga ganacsatada Kenya, Vimal Shah ayaa ku baaqay in natiijooyinka doorashada ay ahadaan kuwa waafaqsan dastuurka, waxwalbana ay ku saleysnadaan sharciga.
Mr Vimal ayaa sidoo kale ugu baaqay kormeryaasha caalamiga in ay dadka la wadagaan warbixinada ku saabsan doorashada, sidoo kale Simon Kimutai oo ah guddomiyaha milkiilayaasha gaadiidka dadweynaha ayaa ugu baaqay dadaweynaha in aysan cabsanin oo waxwalbo ay caadi yihiin.
Guddiga doorashada kenya ayaa ku gacan seeray eedeymaha ka soo yeeray isbaheysiga mucaaradka ee ahaa in hanaanka computerada ee guddigaasi la jabsaday.
Musharaxa ugu tunka weyn mucaaradka ee Raila Odinga, ayaa qaadacay natiijada horudhaca ahayd ee doorashada madaxtinimada ee qabsoontay maalintii Salaasada, taas oo muujineysay in madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyata uu si weyn uga horeeyay Raila Odinga.
Xoghayihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo ku sugan kenya, kana mid ah boqolaal kormeerayaal caalami ah ayaa ugu baaqay dhamaan dhinacyada in ay dulqaad muujiyaan.
Kerry ayaa sheegay in dadka kenyanka ay fursad u heleen in caalamka ay tusaan in hannaanka doorashada ay sharaf u tahay qof walba oo codeeyay.
Madaxweynihi hore ee waddanka Ghanna John Mahama oo isna ka mid ah kormeerayasha caalamiga ayaa ugu baaqay dadka kenyanka ah degenaansho, kadib markii taageerayaasha xisbiga mucaaradka ay isku dhaceen booliiska.